Iposi eliThunyelwe ngokuKhawulezileyo kwiiQhinga lokuThengisa elinempembelelo kwiihotele | Martech Zone
Yikes… ukuba awuyibonanga imeko yakutshanje phakathi kokunyuka kwempembelelo kwimidiya yoluntu uElle Darby noPaul Stenson, umnini weDublin yeWhite Moose Café kunye neCharleville Lodge. Nini Eli Darby Ugqibe kwelokuba aye eholideyini, wafikelela kwiihotele ezininzi anokuba nomdla wokuhlala kuzo ukuze abone ukuba zinokubonelela ngokuhlala kwintengiso kwintengiso ethile ngababukeli bakhe beendaba.
Akukho mntu ucela iisenti zam ezimbini, kodwa ndifuna ukubonelela. Ndiyakholelwa ukuba kukho indawo yokuthabatha bobabini uNksk Darby kunye noMnu Stenson:
Mnu. Stenson -UNks uDarby ucaphukile kuba engaziwa ngomsebenzi awenza kwi-intanethi kubathengi bakhe. Ndiyavuma-abantu abasoloko befumana ixabiso emsebenzini kwaye ababoneleli bemixholo benza. Kananjalo abantu abadli ngokubazi ubude bexesha kunye nomzamo owenzileyo ukufikelela kulo naliphi na inqanaba lempembelelo. Umnumzana Stenson khange afune ukuya esidlangalaleni kwaye ahlasele uNks. Darby.
Mnu Darby -Ndazile kwaye ndangabahlobo nabanini beendwendwe ezininzi. Kungumsebenzi ongenambulelo apho usebenza khona iintsuku ezisi-7 ngeveki kwaye kulindeleke ukuba ubonelele ngenkonzo yeenkwenkwezi ezi-5 ngamanye amaxesha ingeniso yeenkwenkwezi ezi-0. Khawufane ucinge ngokusebenza iminyaka ukufumana indawo yamaphupha akho kuphela ukuba ucelwe kaninzi ngabantu abafuna njalo trade Umsebenzi onzima wokubhengeza. Ngelixa usazi ukuba balijongele phantsi ixabiso onokubanika lona, ​​ndiyakholelwa ukuba ungayijongela phantsi iinzame abazithathileyo zokwakha igunya labo kunye nokuthembeka kushishino lwabo olunokhuphiswano.
Umnumzana Stenson ubonakala ephindaphindeka ezantsi kwithuba lokugcina emxholweni, Ukwenza i-invovo uNks Darby ukuvezwa kwemithombo yeendaba kwisigidi esi-6.5 sezigidi. Owu, kwaye uphehlelele umgca wengubo.
Andikholelwa ukuba le yimeko apho ukuthembeka kwempembelelo yemidiya yoluntu kudlala kuyo okanye nokuba ayiyimveliso ethembekileyo. Ngamaqela amabini kuphela angaliqondiyo ixabiso lesithembiso somnye. Njengomntu onempembelelo kunye nomntu oshishino, ndiyabeka kwaye ndibekelwe ukubandakanyeka okunje. Impendulo yam ayiyonyani, kodwa iyaqhubeka ukunceda igama lam. Nantsi…
Ewe… nantso ke. Akukho mvakalelo zibuhlungu, akukho zinvoyisi, akukho kuvezwa koluntu, akukho kuhlaselwa ngamajoni ezobulungisa kwezentlalo… impendulo elula, enesidima.
Oko kwathethi, andibonakali kumanqaku ali-114 kumazwe angama-20.
Ukuthatha kwam oku kukuba uNks.Darby kunye noMnu.Sensenson basenokufuna ukuphuma baye kubhiyoza kunye, bobabini bazuze ngaphezulu kwexabiso labo kuluntu ngemizamo yabo. Oko kwathethi, andiqinisekanga ukuba naliphi na iqela lenze uvelwano, imbeko, okanye ukunconywa abanokucinga ukuba bakwenzile. Ukujonga imeko ngokujonga ngasemva, njengoko ndenzayo, kuhlala kulula kwaye andigxeki naliphi na iqela… ndinika nje ingxelo yabaphembeleli kunye neehotele ezinokuthi zikwimeko efanayo.
Iihotele kunye nokuThengiswa kweMpembelelo
Izibalo zicacile ukuba ukuthengisa okunempembelelo kunokuba luncedo kwiihotele. Isingqisho sokuqala safumanisa ukuba kuyo yonke i- $ 1 echithwe kwintengiso yempembelelo, i-2.26 yeedola kwixabiso lemithombo yeendaba elibuyisiweyo labuyiselwa. Inkxaso ethe xhaxhe kaNks. Davis, iipesenti ezingama-63 zabathengi baseYurophu bafumanise ukuba izimvo ezithunyelwe kwi-intanethi kunye neengcebiso zezona zimbini ezenziwa kwiifomathi xa kufikwa kwindawo yokuhlala ihotele [/ iqhosha]
Indlela yam yobuqu yokuthengisa ngentsholongwane yahluke kakhulu kuninzi, kodwa indisindisa kwezi meko zingasentla. Inqaku lam kwiinkampani yile-makhe ndibeke igama phaya kwaye emva koko siza kubona ukuba isebenza njani. Iihotele, loo nto yahluke kancinane kuba ukuhlala kwakho kwakuyinkcitho ehotele. Mhlawumbi isivumelwano besinokubekwa apho uNks.Darby wathembisa ukubhatalela ukuhlala-kodwa wayefuna ukubazisa ukuba unefuthe kwishishini labo. Emva koko wayenokunikezela ngesaphulelo okanye ukubuyiselwa imali ngokusekelwe kwimpendulo. Into efana,
Uluntu endiluphuhlisileyo kule minyaka idlulileyo lusabela kuhlaziyo lwam kwaye uninzi lwazo lunyanzelekile ukuba luye eholideyini ekufutshane nendawo yakho yokuhlala. Ukuba unomdla, ndingathanda ukubhala malunga nokuhlala kwam kwaye ukuba ikwenzela ishishini elongezelelweyo mhlawumbi sinokulungelelanisa isaphulelo okanye isimahla simahla kwixa elizayo. Ukulunga kuyazi ukuba ndisoloko ndifuna ukuhlala eDublin! ”
Akunzima konke konke, akunjalo? Akukho monakalo, akukho bubi… nje ikhontrakthi yangaphambili ebeka ulindelo kwaye icele impendulo. Kwaye hayi, enkosi. Impendulo efanelekileyo ngokupheleleyo.
Ihotele ilinganisa njani i-ROI yeNtengiso yokuPhembelela?
Le infographic evela IYurophu wenza umsebenzi obalaseleyo wokunceda abathengisi beehotele ukuba bayiqonde imbuyekezo, inkqubo, kunye nendlela yokulinganisa ifuthe lokuthengisa okunempembelelo. UMnu Stenson unokufuna ukujonga! Emva kokuba uNkosazana Darby eposile, ngewayelinde iiveki ezimbalwa kwaye wathelekisa iziphumo nezinye iinzame zokuthengisa awayezihlawulela, ejonge ngamehlo abukhali:
uthethathethwano -Inani lezinto ezithandwayo, amagqabantshintshi kunye neempendulo kunye nefuthe.
Intsholongwane -Ngakanani umxholo okwabelwana ngawo kwaye uphinde wathunyelwa.
abalandeli - ukukhula okanye ukukhawulezisa kwinani labalandeli emva kokukhankanywa.
Ukuhlala - amaxabiso okuhlala ngokuhamba kwexesha.
I zithuthi - ukugcwala kwiwebhusayithi yehotele.
Fi kelela - bangaphi abantu bebonke abazibonile iiposti (ze).
Ukubhengezwa: Andifumananga kwanto ngokwabelana ngale infographic ivela eYurophu! Kwaye khange ndinxibelelane noNksk Darby okanye uMnu Stenson.
tags: Elle darbeihoteleIcandelo lehoteleIntengiso yempembelelo kwihoteleUkuthengisa ehoteleukuthengisa okunempembeleloihotele i-killarneyUPaul stensoniYurophuhambaishishini lokuhambaI-White Moose Café kunye neCharleville Lodge
Coggle: Elula, yokuSebenzisana neMephu yokuKhangela ngokuSebenzayo